ग्यास्ट्रिकको समस्या छ ? नखानुहोस् टमाटर, हुन्छ यस्तो अल्सरको ख’तरा – Khabar Patrika Np
ग्यास्ट्रिकको समस्या छ ? नखानुहोस् टमाटर, हुन्छ यस्तो अल्सरको ख’तरा
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भाद्र २५, २०७८ समय: १०:३८:११
एजेन्सी । के तपाईलाई ग्याष्ट्रिकको समस्या छ ? या परिवारका सदस्य यस समस्याबाट जुधिरहनुभएको छ ?हुन त “भनिन्छ हरेक नेपालीलाई ग्यास्ट्रिक छ ।” खानपान गर्ने तरिका नमिल्दा ग्यास्ट्रिकको समस्याले सताउने गर्छ ।